Aurora Borealis any Danemark | Fitsangatsanganana tanteraka
Aurora Borealis any Danemark
Daniel | | Danemark
La Jiro avaratra any Danemark fizarana voajanahary mahasarika mpitsidika an'arivony isan-taona izy io. Ireo jiro miloko mahafinaritra izay manondraka ny rahony dia mitovy amin'ny hita any amin'ny firenena Skandinavianina hafa toa an'i Norvezy, Suède na Failandy. Na izany aza, maro no mino fa ny jiro izay hita eny amin'ny habakabaka Danoa dia tena tsara tarehy.
Na izany aza, io fahagaga io dia tsy hita isan'andro. Ny Jiro Avaratra any Danemark dia azo jerena ihany amin'ny fotoana iray amin'ny taona fa tsy isan'andro akory, satria miankina amin'ny fahitana azy ireo. Raha tsara vintana ianao mandeha any Danemark ary afaka mankafy an'io fahagagana io, dia hanana fahitana izay tsy hohadinoinao mandrakizay.
1 Inona avy ireo hazavana avaratra?
2 Rahoviana no hahita ireo Jiro Avaratra any Danemark?
3 Toerana hijerena ny Jiro Avaratra any Danemark
4 Ahoana ny fakana sary ny Jiro Avaratra
Inona avy ireo hazavana avaratra?
Ny aurora borealis (antsoina koa hoe polar aurora) dia fisehoan-javatra tsy manam-paharoa amin'ny atmosfera izay miseho amin'ny endrika famirapiratana na fahazavana eo amin'ny lanitra amin'ny alina. Amin'ny hemisphere atsimo dia fantatra amin'ny anarana hoe aurora atsimo.
Tamin'ny andro taloha dia nino fa ireo hazavana selestialy miafina ireo dia manana fiandohana avy amin'Andriamanitra. Any Chine, ohatra, dia nantsoina hoe "dragona any an-danitra." Tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ihany no nanomboka nandinika ny trangan-javatra tamin'ny fomba fijery ara-tsiansa. Izahay dia manana ny teny hoe "aurora borealis" ankehitriny amin'ilay astronoma frantsay Pierre Gassendi. Taonjato iray taty aoriana, ny voalohany nampifandray ilay trangan-javatra tamin'ny sahan'andriambin'ny Tany dia ny anglisy Edmund halley (ilay iray ihany izay nanisa ny boriborintany ny kometan'i Halley).
Jiro Avaratra any Danemark
Androany dia fantatsika fa ny Jiro Avaratra dia misy rehefa miparitaka miaraka amin'ny Ampinga tsy hita maso an'ny Tany, karazana ampinga izay manodidina ny planeta amin'ny endrika sahan'andriamby avy amin'ny andry roa. Ny fifandonana eo amin'ny sombin-tsolika amin'ny habakabaka miaraka amin'ireo sombin-kazo voadidy avy amin'ny taratry ny masoandro dia mahatonga azy ireo hamoaka angovo sy hamoaka hazavana. Mamorona izany aloky ny maitso, mavokely, manga ary volomparasy mandihy any an-danitra Ity «fianjerana» ity dia atao amin'ny haavo 100 ka hatramin'ny 500 kilometatra ambonin'ny tany.
Rahoviana no hahita ireo Jiro Avaratra any Danemark?
Na dia mitranga mandritra ny taona aza izy ireo dia tsy hita amin'ny fotoana sasany ihany ny Jiro Avaratra. Ny fotoana tsara indrindra hahitanao ireo Jiro Avaratra any Danemarka dia eo anelanelan'ny volana aprily sy septambra. Mandritra io vanim-potoana io, ny fahavaratra amin'ny hemisphere avaratra, maizina ny alina ary somary be rahona ny lanitra.
Amin'ny hariva sy aorian'ny filentehan'ny masoandro no manomboka miseho ireo jiro majika ireo. Ny hazavana avaratra (fantatry ny Danes hoe Nordlys) manaitra ny vahiny, indrindra ireo izay avy amin'ny latitude hafa ary mbola tsy nahita an'io tranga io taloha.
Mampalahelo fa amin'ny andro misy oram-baratra na rehefa alatsinainy dia saika tsy ho vita ny hijoro ho vavolom-belona amin'ireo jiro avaratra. Raha misy tafio-drivotra dia tsy ho hitanao ny Jiro Avaratra, satria mamirapiratra loatra ny lanitra ka tsy hita taratra amin'ny mason'olombelona ny lokony.
Amin'ny manaraka horonantsary timelaps, nalaina sary an-tsary Limfjord Amin'ny taona 2019, azonao atao ny mankasitraka ny herin'ity tontolon'ny natiora ity:
Toerana hijerena ny Jiro Avaratra any Danemark
Ireto misy toerana tsara indrindra hahitana ireo Jiro Avaratra any Danemark:
Ny Nosy Faroe. Ao amin'ity nosy ity izay misy eo anelanelan'ny Atlantika Avaratra sy ny Ranomasina Norvezy, dia zara raha misy fandotoana maivana, izay antoky ny lanitra mazava sy mazava handinihana ireo Jiro Avaratra amin'ny fahafenoany rehetra.
Greenen Saikinosy kely iray izy io, any amin'ny farany avaratry ny tanibe Danemark. Ho fanampin'ny latitude, ny antony mahatonga ity toerana ity ho teboka fandinihana tsara dia ny tsy fisian'ny hazavana artifisialy avy amin'ny toeram-ponenan'olombelona.
Kjul Strand, morontsiraka lava eo amin'ny sisin'ny tanànan'i Hirtshals, avy any amin'ny toerana misy ferry maro mankany Norvezy.
Samsø, nosy iray any andrefan'ny Copenhagen ary malaza amin'ny tontolo voajanahary voatahiry tsara. Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra faritra voajanahary any Danemark.
Ahoana ny fakana sary ny Jiro Avaratra
Saika ny olona rehetra manatri-maso aurora borealis any Danemark dia manandrana maka ny hakanton'ity tranga ity amin'ny fakantsary fakana sary na horonantsary azy ireo, maka ny majika mandrakizay.
Mba hisoratra anarana tsara ny sary dia ilaina izany Mampiasà toerana fampisehoana maharitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny hidin'ny fakantsary dia mila mijanona misokatra lava kokoa (10 segondra na mihoatra), ka mamela hazavana bebe kokoa hiditra.
Zava-dehibe koa izany mampiasa tripod hiantohana ny fahamarinan-toerana amin'ny fakantsary mandritra ny fotoana fisehoana.
Na eo aza ny zava-drehetra, ary na manao ahoana na manao ahoana ny fandehanan'ireo horonan-tsary sy sary rehetra ireo, dia tsy misy na inona na inona amin'ny fahatsapana ny fandinihana ireo jiro matoatoa va amin'ireo jiro avaratra mitsilopilopy manerana ny lanitra, ambonin'ny lohantsika. Traikefa iray izay tokony hankafizana farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Aurora Borealis any Danemark
Nitsangana ny Tudor, voninkazo nasionalin'i Angletera